Wararka Maanta: Talaado, Mar 27, 2012-Xiisad Dagaal oo ka Taagan Gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya
Xiisad Dagaal oo ka Taagan Gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya Talaado, Maarso 27, 2012 (HOL) — Wararka aynu ka heleyno gobolka Jubada hoose ayaa sheegaya in saaka dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xooggan laga dareemayo deegaanada hoostaga degmada Afmadow, iyadoona dhaqdhaqaaqyadaasi ay u dhexeeyaan ciidamada dowladda KMG oo garab ka helaya kuwa Kenya iyo xoogagga Al-shabaab.
Mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka Dhoobley oo ka gaabsaday magaciisa ayaa HOL u sheegay in ciidamada dowladda KMG iyo kuwa Kenya oo aad u hubeysan ay saaka u ruqaansadeen dhanka Degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose.
Xaaladda magaalada Afmadow ayaa ah mid kacsan, iyadoona la sheegay in xoogagga Al-shabaab ay hawada ka saareen gabi ahaanba isgaarsiintii degmadaasi, kadib markii ay ka warheleen gulufka colaadeed ee kusoo wajahan.
Afhayeenka ciidamada dowladda KMG ee Jubooyinka Max’ed Daahir Faarax, ayaa sheegay in ay qorsheynayaa in saacadaha nagu soo aadan ay la wareegaan degmada degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose, oo kamid ah saldhigyada ugu muhiimsan ee ay xoogagga Al-shabaab ku leeyihiin Jubooyinka.
Illaa imika ma jiraan masuuliyiin katirasn xoogagga Al-shabaab oo ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira galbeedka gobolka Jubada Hoose.
Xiisadahan dagaal ee kasoo cusboonaaday Jubooyinka ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda Kenya ay dhawaan boqollaal ciidan ah ku soo biirisay askarteeda ku sugan Jubooyinka.
Talaado, Maarso 27, 2012 (HOL) — Waxaa maalmahan Muqdisho ku sugnaa laba xubnood oo ka socda jaamacadda California, San Diego oo kala ah, Dr Nicholai Lidow oo bare ka ah jaamacadda iyo Cabdimaalik Cali Bucul oo ku jira diyaarinta dhammaadkii Masters in Education Sen Diego State University isagoo ka mid ah xubnihii aasaasay ururka dhallinyarada SYL ee San Diego, waxayna Muqdisho u yimaadeen in baaritaan ay ku sameeyaan arrimo fara badan. Madaxweynaha Somalia iyo Wafdi uu ka mid ahaa Afhyeenka Baarlamaanka oo booqday Degmada Cadaado 3/27/2012 7:03 AM EST